Xafiiska Musuq Maasuqa Daran oo soo afjaray baarista eedeyntii Soma Oil & Gas – fogaanarag
Muqdisho, 19 December, 2016. Wasaaradda Batroolka & Macdanta waxay soo dhaweynaysaa go’aankii Xafiiska Musuq Maasuqa Daran ee Boqortooyada Ingiriiska uu ku soo afjaray baaristii Soma Oil & Gas Exploration Limited (SOMA). Soma ayaa lagu eedeeyay in lacag laaluush siisay masuuliyiin Soomaaliyeed oo ka tirsan Wasaaradda Batroolka & Macdanta. Eedaynta Soma ayaa noqotay mid dad badan soo jiidata dareenkooda. Nasiib wanaag baaristii waxay ku soo gaba gaboobday inayan jirin wax cadeyn ah oo sheegaya in laaluush la kala qaatay.
Wixii faahfaahin ah kala xariir: